“ဇ” ရုပ်ပြကာတွန်း ၁။ ခင်
၂။ ရင်ခွင် ( ၁ )
၃။ ရင်ခွင် ( ၂ )
၄။ နှစ်ပင်လိမ် အဖြည့်ခံ ၅။ ကျောက်ဂူထဲမှာ
၆။ အတူဖြီးတဲ့ တူဝရီး
၇။ အိမ်နီးချင်းကောင်း ဟာသ ၁။ သုံးသုံးလီကိုး ၂။ ၅ ကျပ် ၃။ အချစ်ကြီး ၄။ အကိုနံမယ် ၅။ အကြောင်းသိတွေ
၆။ သေသော်မှတည့်.......... ၇၊ အပျိုကြီး ၈။ အဘတာဝန်ထား ၉။ အပ်နဲ့ချူပ်ပါဆို...
၁၀။ ဘာခုမှကြောက် ၁၁။ ချမ်းသာပြီတော်ရေ... ၁၂။ ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ ၁၃။ ဒါကြောက်မို့တစ်ခါတစ်ခါ ၁၄။ ဒို့များအတွက် ၁၅။ ကြားဝူးးးး ၁၆။ ဟိုကောင်လဲပဲ
၁၇။ အင်း..ဒါပေမယ့် ၁၈။ ဇွန်လိုင်လ ၁၉။ ခံစားချက် ၂၀။ ကိုယ်စီးတဲ့မြင်း
၂၁။ ကိုရွှေ-ီး ၂၂။ ကြားဖူးနားဝ ၂၃။ ကြက်သားမစားတော့ဘူး ၂၄။ ကောင်းတော့လည်ပင်း
၂၅။ ကျိုးရော့ငါ့-ီး ၂၆။ လမသာလို့ ၂၇။ -ီးမီး ၂၈။ -ီးမီး ( ၁ ) ၂၉။ -ီးတောင်လာပြီ
၃၀။ လိုတရမှ အလိုကြီး ၃၁။ မဟာဒုတ် ၃၂။ မအောင့်နိုင်လို့ပါ ၃၃။ မီးလောင်သွားပြီ ၃၄။ မောင်မောင်ညိုမောင်မလာ ၃၆။ မိအေးနှစ်ခါနာ ၃၇။ မိုးချိုမ်းလို့ ၃၈။ မုတ်ဆိတ်ရိတ် ဂျုတ်
၃၉။ နောက်သုံးလ ၄၀။ အုန်းသီးစားမလား ၄၁။ အော်.. ဒါကြောင့်ကိုး ၄၂။ ပန်းပန်လျှက်ပဲ
၄၃။ ပါးချလိုက်မယ် ၄၄။ ပေါက်ဈေး ၄၅။ ပြန်ဆင်းလို့မရတော့ဘူး ၄၆။ -ုတ်ဝေးသူ ၄၇။ ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် ၄၈။ ပြန်မအမ်းနိုင်လျှင် ၄၉။ ဆယ်ခါပြန် ၅၀။ စိတ်ပူလိုက်ရတာ
၅၁။ ဆရာကတော့ ဆရာပါပဲ ၅၂။ ဆရာတော် ၅၃။ ရွှေ-ီးညို ၅၄။ အသေးဆုံးနဲ့ အကျယ်ဆုံး
၅၅။ ဆုတောင်းမှားလို့ ၅၆။ တစ်ကယ်လား အိပ်မက်လား ၅၇။ တစ်ကယ်လို့ငါသာ ၅၈။ တစ်နေ့တစ်ခါ ၅၉။ တော်ပါသေးတယ်ဗျာ ၆၀။ တစ်ထုံးနှစ်ထုံး ၆၁။ သာဂီသုံးခါနာ ၆၂။ သိချင်လား ၆၃။ သူကြီးကတော် ၆၄။ တင့်တင့်တို့အရွယ် ၆၅။ သွားပါပြီကွာ ၆၆။ ရဲဘော်သတိ ၆၇။ ရွာထဲလူသစ်ဝင်တယ် အချစ်ဇာတ်လမ်း ၁။ အချိန်ပိုင်းလင် ၂။ အချစ်အတွက် ၃။ အချစ်ကျိန်လုံး ၄။ အချစ်မာယာ ၅။ အချစ်ရှာဖွေသူ ၆။ အချစ်မှော်ဆရာ ၇။ အဓမ္မကာမ၏ အရသာ ၈။ အတာရေနဲ့ဆေးပါ့မယ်
၉။ အသည်းတွေလည်းကျွမ်းပြီငယ် ၁၀။ အခါလွန်မိုး ၁၁။ အမှန်တစ်ကယ်စားသုံးသူ
၁၂။ အမုန်းငယ်ရဲ့ အမုန်းပင်လယ် ၁၃။ အငြိမ့်သမီးများရည်းစားထားတော့ ၁၄။ အပျိုကြီးမမ
၁၅။ အပျိုစင် ၁၆။ အရက်သမားဆို သိပ်မုန်းတယ် ၁၇။ ၀တ်ရုံနက်နဲ့လူ ၁၈။ အပြာရောင်သစ္စာစကား
၁၉။ ပင်လယ်ပြာပြာ အချစ်ပြာပြာ ၂၀။ ချစ်ခြင်းဖွဲ့သံစဉ် ၂၁။ ချစ်ခြင်းရဲ့သက်သေ
၂၂။ ချစ်ကန္တာရလမ်းဝယ် ၂၃။ ချစ်လိုက်တာနော် ၂၄။ ချစ်နည်းလမ်းပွင့် ၂၅။ ချစ်နည်းများ ၂၆။ ချစ်ပေါက်ကွဲသံစဉ် ၂၇။ ချစ်ရသော….ဦး ၂၈။ ချစ်ရာသက်ပန် ၂၉။ ဒံပေါက်နဲ့ကြေးအိုး
၃၀။ ဓါတ်လိုက်တတ်သည်သတိထား ၃၁။ မရှက်ပါနဲ့ကလေးရယ် ၃၂။ NOW ! DO YOU BELIEVE I LOVE YOU?
၃၃။ ဒီပိုး ၃၄။ ရေပွက်တစ်ခု ၃၅။ လှိုင် သို့မဟုတ် ကွိုင် ၃၆။ ခါးပိုက်ထဲကမြွေပွေး ၃၇။ ခင်တို့အရွယ်
၃၈။ ခင်ထားလင် မများပါ ၃၉။ ကိလေသာဓါတ်တိုင် ၄၀။ ကိုကိုမောင်တော်တော်ဆိုး ၄၁။ ကိုလူပျို ၄၂။ လမ်းကြုံရင် ၄၃။ လက်ဦးဆရာ ၄၄။ လောကစည်းစိမ် ၄၅။ လေလှိုင်းထဲက ချစ်ပုံပြင်(၁)
၄၆။ လေလှိုင်းထဲက ချစ်ပုံပြင်(၂) ၄၇။ အချစ်(၁) ၄၈။ အချစ်(၂) ၄၉။ လူယုတ်မာ ဦးလေး ၅၀။ မချစ်တတ်သူများမဖတ်ရ ၅၁။ မထွေးအသားမခါးပါ ၅၂။ မမကိုအလိုအလိုက်နဲ့မောင်
၅၃။ မမ မောင်မောင် မို့မို့ ၅၄။ မမသွယ် ၅၅။ မနှုးမနပ်ကလေး ၅၇။ မာနမင်းသမီး
၅၈။ မောင်မောင်ကိုး ၅၉။ မိုးမမြင် လေမမြင် ၆၀။ နားနားနေနေ ၆၁။ နတ်သမီး
၆၂။ ငတ်မပြေ ၆၃။ နှလုံးသားအသစ်နဲ့အချစ် ၆၄။ နှလုံးသား ၀ပ်ရှော့ခ် ၆၅။ ချစ်တာအပြစ်လား ( ၁ )
၆၅။ ချစ်တာအပြစ်လား ( ၂ ) ၆၆။ ချစ်တာအပြစ်လား ( ၃ ) ၆၇။ သူနာပြုဆရာမလေး၏အတွင်းရေး ( ၁ )
၆၈။ သူနာပြုဆရာမလေး၏အတွင်းရေး ( ၂ ) ၆၉။ ဥမ္မာ ၇၀။ Oh My Darlin ၇၁။ ပန်းခရေ
၇၂။ ဖောက်ပြန်လေသည့် အချစ်များ ၇၃။ ဖေဖေကြီး ညာတယ် ၇၄။ ပူစူးမ ၇၅။ စိတ်ကစားတဲ့မမ ( ၁ )
၇၆။ စိတ်ကစားတဲ့မမ ( ၂ ) ၇၇။ စိတ်တူကိုယ်တူ ၇၈။ တဲ့ဝင်သွားသော ခွင်တစ်ခွင် ၇၉။ တစ်ပွင့်နှစ်ခိုင်
၈၀။ တိတ်တိတ်ခုန်နှလုံးသား ၈၁။ တေလေမ ၈၂။ သံယောဇဉ်မလေး ၈၃။ ကျွန်တော့်ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း ( ၁ )
၈၄။ ကျွန်တော့်ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း ( ၂ ) ၈၅။ ကျွန်တော့်ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း ( ၃ ) ၈၆။ ကျွန်တော့်ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း ( ၄ ) ၈၇။ ကျွန်တော့်ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း ( ၅ ) ၈၈။ ဂီး ၈၉။ သမီးရဲ့ဦး ၉၀။ ဖြစ်ရပ်ဇာတ်လမ်း ၉၁။ ခင်မမ ၉၂။ ဦးကြာဖူး ၉၃။ ဗီဒီယိုအချစ်
၉၄။ ရာဇ၀င် ၉၅။ ရင်ခွင်
၅။ ရုံးအတွင် ဇာတ်လမ်းများ(၂) Myanmar LoveStories ၊ ပေါသွပ် နှင့် အခြား website များမှ ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ကူးယူဖော်ပြထားပါသည် ebook ကိုဖတ်ဖို့ Adobe Reader မရှိရင် ဒီမှာယူပါ Sign in|Recent Site Activity|Report Abuse|Print Page|Powered By Google Sites